गठबन्धन सफल, संघीय चुनावसम्म लैजान्छौं : कांग्रेस » मालिका समाचार
गठबन्धन सफल, संघीय चुनावसम्म लैजान्छौं : कांग्रेस
मालिका समाचार २०७९,जेष्ठ-९,सोमबार १६:४२
काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन सफल भएको बताएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम अन्तिम चरणमा आइपुग्दै गर्दा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हु्न् ।
‘निर्वाचन परिणाम सन्तोषजनक छ । कांग्रेस आफैंले पनि धेरै ठूलो सफलता हासिल गरेको छ’, उनले भने, ‘तालमेलसहित निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने सहयोगी दलहरुले पनि उल्लेख्य सफलता पाएका छन् । कांग्रेसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।’ कांग्रेसले ३२० पालिका जितिसकेको बताउँदै उनले सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने पनि बताएका छन् ।
जुन परिणाममा ३२० ठाउँमा कांग्रेसले जितिसकेको छ । अझै हामी ६ स्थानमा अग्रता लिएका छौँ, हामी जित्दैछौं’, उनले थपे, ‘जनमत हाम्रो पक्षमा आइसकेको छ । गठबन्धन दलहरु सहयोगीका रुपमा निर्वाचनमा गएका थियौं । समग्रमा लय मिलेको छ । अपवाद बाहेक गठबन्धन सफल भएको छ ।’
उनले यो निर्वाचन परिणामबाट गठबन्धनको नेतृत्व खुशी भएको दावी गरे । ‘गठबन्धनको नेतृत्व पनि यसबाट खुशी नै छ । नेपाली कांग्रेस पनि यस परिणामबाट सन्तोष छ’, उनले भने, ‘प्रदेश र संघको निर्वाचनमा गठबन्धन लैजाने मजबुत आधार पनि निर्वाचनले बनाएको छ ।’
‘हाम्रो पार्टीमा अन्तरघात अझै पनि छ । अन्तरघात नभएको भए कांग्रेसले ४ सय पालिका जित्थ्यो’, उनले भने, ‘हार–जितबारे पार्टीले केन्द्रीय समितिबाट समीक्षा गर्ने छ। समग्रमा अहिलेको परिणाम सन्तोषजनक र सकारात्मक छ ।’
महतले एक्लै लडेका ठाउँमा पनि कांग्रेस सफल भएको बताएका छन् । ‘एक्लै लडेका ठाउँमा पनि कांग्रेस सफल भएको छ । समग्रमा गठबन्धन दल समेतको निकै ठूलो अग्रता कायम गर्न सफल भएका छौँ’, उनले भने, ‘हामी बहुमत नजिक छौं । तर स्थानीय तहको बहुमतको अर्थ हुँदैन । तर अब हामी संघीय सरकारमा बहुमत हासिल गर्छौ ।’
Previous बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी
Next शव वाहन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने वडा अध्यक्ष बि क.को पहिलो निर्णय
जनार्दनलाई महासचिव बनाउने प्रचण्डको तयारी !
२०७९,असार-२२,बुधबार ०८:४३ मालिका समाचार
देउवाले बालेनलाई भने– चमत्कार गर्नुभयो, मलाई चौबीसै घण्टा सम्झन सक्नुहुनेछ
२०७९,जेष्ठ-१८,बुधबार १९:१३ मालिका समाचार